Apple Music inoda chaizvo kumonyaniswa here? | Ndinobva mac
Apple Music inoda chaizvo kumonyaniswa here?
Peter Rhodes | | Apple Music, Apple zvigadzirwa
Tave tichidzidza dhata kwemazuva maviri nezve zvingangoitika kuvandudzwa kweese Apple Music interface uye nemabasa ayo uye masevhisi. Apple's mimhanzi yekushambadzira sevhisi, zvinoenderana neyedu mudziyo patinoishandisa, ine yakashandurwa uye dzakasiyana interface isingazadze anopfuura mumwe mushandisi. Mune kesi ye OS X, isu tine basa rakanyatso kubatanidzwa mukati mekushandisa kweTunes.
Nekudaro, kubvira payakatanga izvi zvakaunza muswe uye ndezvekuti vashandisi vangadai vakafarira sevhisi yekushambadzira mimhanzi kuti ive mune yakasarudzika application kuti yavo mimhanzi isasanganiswe neizvo isu zvataigona kutora kubva kuApple gore. Izvi, pamwe chete nenyaya yekuti iyo iTunes application paMacs haina kumbobvira yave nyore kushandisa, zvinoita kuti zvive nyore kuti izvo zviri kutaurwa nerunyerekupe chaizvo pane shanduko mumashandiro ebasa anosvika anotevera WWDC 29016.
Hatigone kuti sevhisi yeApple yekushambadzira mumhanzi, Apple Music, yakundikana uye ndeyekuti data razvino ratinaro nderekuti ivo vatove nevanopfuura mamirioni makumi matatu ekunyorera kwairi. Ikozvino, kune vazhinji vashandisi, kusanganisira ini, vasina kupedza kupa go-kumberi kune iyo nzvimbo inoshandiswa kufamba kuburikidza nebasa.
Kubvumirana pakati pezvinoitwa paMac uye zvinoitwa pane chishandiso cheIOS senge iPhone kana iPad inofanirwa. Ini ndinofunga iko kugadzirisa mune iyi pfungwa kuwedzera kune kugadzirisa mutengo inogona kuita kuti sevhisi ibudirire kusvika kupfuura mamwe masevhisi emakwikwi.
Zvinotaridza kuti Apple yatora cherechedzo uye yaona zvatakakuudza uye runyerekupe rwuri kutenderera pamambure rwakanangana nekugona kunatsiridza mushandisi interface zvese pane OS X chikuva uye paIOS pamwe nekudonha kwemutengo. iyo iri kutanga kuiswa munyika dzinoverengeka kune vadiki Apple vateveri.
Zvino, iwe unofunga kuti Apple Music inogona kusimudzira maererano nekunyoreswa neshanduko idzi? Iwe unofunga kuti kungangodaro kunyangarika kweConnect tab kwaive kupfuura "kuimba"? Tichaona izvo vakomana veCupertino vakatigadzirira iyo inotevera WWDC 2016. Izvo zviri pachena ndezvekuti zvavakaisa mari muApple mumhanzi hazvisi kuzozvibvumira kufa zvakadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music inoda chaizvo kumonyaniswa here?
Kutendeseka, zvinoita senge kwandiri sezvazviri.
Ini ndinofunga kubudirira kweTunes munhoroondo yese ichokwadi. Iyo iPod yakunda nekuda kweiyo App hombe iyo inoshandura mimhanzi yedu kuita dhatabhesi yakakwana. Apple Music uye iTunes zvinofanirwa kunge zviri pamwe chete kurodha mimhanzi yako yese kune gore uye chengetedza iyo dhatabhesi, uye zvakaburitswa uye zvinofarira zveumwe neumwe. Shanduko huru inogona kukanganisa mamirioni uye mamirioni evateveri vanonzwisisa uye vanoda iTunes.
Ini ndinobvuma kuti yakakwana seizvi, kunyange yaizonatsiridza nzvimbo dzeCarPlay.
Apple inozivisa kudyidzana kwebhizimusi nyowani neSAP
Maitiro ekusevha wega mufananidzo wemifananidzo yako yakaputika